Dastuurka dad wareeriska ah iyo danaha ka dambeeya..! (Qalinkii Maxamed Xaaji)‏ | HobyoNet.Com	Contact
Wednesday, May 16th, 2012 | Posted by Hnet Dastuurka dad wareeriska ah iyo danaha ka dambeeya..! (Qalinkii Maxamed Xaaji)‏
Fikrado-hobyonet)CARAWEELO ama ARAWEELO sida la sheego waxay la maqan tahay godobtii ragga oo ay DHUFAANI jirtey waloow ay ku baxday gacanta ninkii ay is tiri ”WAA DOQONE ISKA DAA” kaasoo ahaa ‘ODAY BIIQE’ lkn halkii ay howlmaalmeedkeeda ku qabsan jirtey oo lagu sheego meel ka mid ah buurta DAALO ayay ilaa maantadan dadku booqdaan iyadoo ay RAGU dhagxiyaan meeshii balse Waxaa CAJIIB ah in ay DUMARKU ubax dhigaan.
1- Marka laga hadlo dastuur horta waa kii ALLE laakiin dadkii meel degani waxay u baahan yihiin heshiisyo iyo hab nololeedyo ay isku raacsan yihiin (Tusaale ahaan waqtiga la shaqeeynayo shiftigiiba) iyadoon laga gudbeeynin xuduudda shareecada islaamka oo iyadu aasaas u ah dhaqanka Soomaaliyeed.
2- Dastuur wuxuu u baahan yahay dal madax banaan, lehna xuduudo sugan oo ay dowlad qur ihi ka arimiso iyo ciidan ilaaliya, hadaba marka aad intaa oo dhan eegto waxaad ogaanaysaaa inaysan micna wayn sameeyneynin in dadka lagu yiraahdo KMG baa laga baxayaa aan gurigeediiba la goglin.
3- Dastuur wuxuu u baahan yahay inay qoraan dad aqoon u leh diinta islaamka, taariikhda dhaqan dhaqaale ee dalka iyo dadka ay wax u diyaarinayaan, xiriirada caalamiga ah iyo sida uu caalamku u wada shaqeeyo, inay yihiin dad la isku hallayn karo mas’uuliyadooda iyo inay yihiin dad wadaniyiin ah oo aragti qaran leh.
4- Dastuur wuxuu u baahan yahay in marka la qoro qof qof loogu qaybiyo dhamaan dadka ku dhaqan dalkaas oo deeto inta aqriyaan kadib ’HAA’ iyo ’MAYA’ qalli ah kaga jawaabaya taasoo ku imanaysa dookhooda iyo sida ay danta caamka ah uga dhex arkaan.
1- Dastuur u sameeynta Dal aan cid maamushaa jirin oo ay dadkiisuna danta guud ka il duufsan yihiin iyagoo xeerinaya xarko ay niman danaystyaal ihi ku xirxirteen.
2- Wada xaajoodyada lagu baaqay ee ay DKMG ah ihi la geleyso maamulka Somaliland oo sida muuqda iskii u istaagey kadib markii la foowdeeyey (Waxaa Somaliland lala hadli karaa oo qura marka la helo nidaam kulmiya dhamaan koofurta).
3- In laga hadlo heshiisyo waawayn sida kuwa badda lagu iibin lahaa ee Alle baabi’iyay.
Hadaba gunaanadkii Beesha Caalamka (Gumeystayaashii hore) iyo kooxaha diinta ku been abuuranaya oo noo jilaya (Caraweelo) iyo shacabkeena oo u kala qaybsan kuwii waxgaradka ahaa oo taladii loo diiday (Yacni la dhufaanay) iyo kuwii kale oo taagan sidii gabdhihii u sacbiyay Caraweeladii raga dhufaantay ayuu xalku taagan yahay ”Waa inaan helnaa Mr ’X’ oo noo jili doona ’ODAY BIIQE’ si dalka loo badbaadsho oo Caraweelo looga takhaluso.